Influxcoin စျေး - အွန်လိုင်း INFX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Influxcoin (INFX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Influxcoin (INFX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Influxcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $35 313.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Influxcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Influxcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
InfluxcoinINFX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.065InfluxcoinINFX သို့ ယူရိုEUR€0.0549InfluxcoinINFX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0497InfluxcoinINFX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0591InfluxcoinINFX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.578InfluxcoinINFX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.409InfluxcoinINFX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.43InfluxcoinINFX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.241InfluxcoinINFX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0863InfluxcoinINFX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0907InfluxcoinINFX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.43InfluxcoinINFX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.504InfluxcoinINFX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.353InfluxcoinINFX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹4.87InfluxcoinINFX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.10.98InfluxcoinINFX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0891InfluxcoinINFX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0994InfluxcoinINFX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿2.02InfluxcoinINFX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.452InfluxcoinINFX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥6.93InfluxcoinINFX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩77.18InfluxcoinINFX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦25.11InfluxcoinINFX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽4.74InfluxcoinINFX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.78
InfluxcoinINFX သို့ BitcoinBTC0.000006 InfluxcoinINFX သို့ EthereumETH0.000169 InfluxcoinINFX သို့ LitecoinLTC0.0012 InfluxcoinINFX သို့ DigitalCashDASH0.000717 InfluxcoinINFX သို့ MoneroXMR0.00073 InfluxcoinINFX သို့ NxtNXT5.07 InfluxcoinINFX သို့ Ethereum ClassicETC0.00958 InfluxcoinINFX သို့ DogecoinDOGE18.77 InfluxcoinINFX သို့ ZCashZEC0.000789 InfluxcoinINFX သို့ BitsharesBTS2 InfluxcoinINFX သို့ DigiByteDGB2.08 InfluxcoinINFX သို့ RippleXRP0.231 InfluxcoinINFX သို့ BitcoinDarkBTCD0.00224 InfluxcoinINFX သို့ PeerCoinPPC0.216 InfluxcoinINFX သို့ CraigsCoinCRAIG29.63 InfluxcoinINFX သို့ BitstakeXBS2.77 InfluxcoinINFX သို့ PayCoinXPY1.14 InfluxcoinINFX သို့ ProsperCoinPRC8.16 InfluxcoinINFX သို့ YbCoinYBC0.00003 InfluxcoinINFX သို့ DarkKushDANK20.87 InfluxcoinINFX သို့ GiveCoinGIVE140.85 InfluxcoinINFX သို့ KoboCoinKOBO14.82 InfluxcoinINFX သို့ DarkTokenDT0.0599 InfluxcoinINFX သို့ CETUS CoinCETI187.82